Amatye okusika amatye abavelisi kunye nabaxhasi - China amatye ukusika umatshini Factory
Umatshini wokusika iBhulorho
Lo matshini wamkela inkqubo yolawulo lwe-microcomputer kunye nomatshini womatshini womntu, odityaniswe ne-encoder ye-rotary ephezulu yokufumana isixhobo se-infrared, usebenzisa inverter ukulawula ukondla ngasekhohlo, uhlengahlengisa isantya ngokwezinto zelitye. Isebenzisa inkqubo yokunyusa i-hydraulic, indibaniselwano ...
Ukucanda Umatshini wokusika iBhulorho
Lo matshini wamkela inkqubo yolawulo lwe-microcomputer kunye nomatshini womatshini womntu, odityaniswe ne-encoder ye-rotary ephezulu yokufumana isixhobo se-infrared, usebenzisa inverter ukulawula ukondla ngasekhohlo, uhlengahlengisa isantya ngokwezinto zelitye. Isebenzisa inkqubo yokunyusa i-hydraulic, ...
Umatshini wokusika ibhulorho ophakathi
Umatshini wokusika ibhloko
Lo matshini wamkela inkqubo yolawulo lwe-microcomputer kunye nonxibelelwano lomatshini womntu, usebenzisa inverter ukulawula ukondla ngasekhohlo, uhlengahlengisa isantya ngokwezinto ezinamatye. Isebenzisa inkqubo yokuphakamisa i-hydraulic, indibaniselwano yesikhonkwane esityhidiweyo se-chrome kunye nokunxiba isikhombisi, ngesikhewu esincinci, esinxibayo, b ...
Manual Cutting Matshini
Lo matshini usebenzisa ubume obudibeneyo; intloko ephambili inokujikeleza i-180 degree kwaye ihambise ngombane ukuya phezulu nasezantsi. Umatshini uphela unesakhiwo esihlangeneyo, ukubonakala okuhle, imisebenzi ezinzileyo kunye nokusebenza ngokuchanekileyo okuphezulu, okulungele ukusika kunye nokugaya izileyiti ezincinci, i-lath kunye neethayile ezityebileyo.